Os Luna Elementary, milamina ihany amin'ny farany! Famerenana | Avy amin'ny Linux
Nitafy Lubuntu faly be aho tamin'izao andro izao, afa-tsy ny lesoka sasany azoko tamin'ny famindran-toerana ny fikandrana sasany.
Miditra ihany aho amin'ny farany Google+ Ary tadidiko ilay fanambarana fa angamba hivoaka izy io Elementary OS milamina Mandeha amin'ny Internet aho ary efa hitako ny ISO. Ampidiniko izy ary andramako amin'ny Live CD.
Eo amin'ny toerana voalohany dia ahitantsika tontolon'ny Desktop, madio, tsara tarehy ary tsotra, mitovy amin'ny an'ny Mac OSX.
Hatreto dia tsara ny zava-drehetra ao amin'ny cd mivantana, mandra-pahatsapanao fa ny fitaovanao dia tsy tohanan'ny Kernel 3.2 sy ny latabatra faha-8, noho izany dia nametraka ny fametrahana ny distro aho ary avy eo nampiasa xorg edgers ppa hanana ny latabatra farany, ary Kernel 3.11 avy amin'ny ppa an'ny Ubuntu Kernels.
Vantany vao vita izany rehetra izany dia nanapa-kevitra ny hanomboka tsikelikely ny fandinihana ny tontolo iainana aho, hijery ireo rindranasa tsirairay avy izahay.
4 Files (Files Phanteon):
6 Lisitry ny fampiharana:
7 System preferences:
8 Ivotoerana rindrambaiko:
Ity fampiharana tsara tarehy ity, aingam-panahy avy amin'ny iTunes. Manolotra antsika ny maodely fijerena 3 mahazatra, amin'ny alàlan'ny fonony, maody lisitra ary fomba "mpanakanto, karazana, rakikira".
Tsotra be ilay rindranasa, manolotra antsika fampitahana miaraka amin'ny LastFM ary hatreto dia tsy misy zava-baovao izay Banshee, Rhythmbox, Clementine, Amarok, Audacious ...
Nandritra ny fitsapana nataoko dia nianjera tamin'ny fomba miafina ny rindrambaiko indroa voalohany naniry hametraka ny fampirimana mozika aho, ny fanintelony dia ny manintona.
Tsy hita ny fisian'ireo radio, toa ny Shoutcast, Icecast, ary koa ny plugin milalao ho an'ny Empathy ankehitriny.
Voalohany milaza fa tena tiako ny fomba mitsangana amin'ireo fantson'ilay programa, mampatsiahy ahy betsaka ny mailaka mailaka avy any Osx izy io.
Nataoko tonga lafatra ny sarin'ireo mailaka Gmail, izay tsy mandeha amin'ny laoniny velively amin'ny KMail.
Ny olana dia rehefa lasa minimalist izy ireo dia nanadino zavatra izay nilaiko tanteraka izy ireo. Ny mitady mailaka, ny teny, ny atiny, ny andro sns sns no resahiko. Tena tsy mahazo aina ny mitady hafatra hatramin'ny taona 2012 nefa tsy manana boaty fikarohana.
Raha te hilaza indray aho fa toa mahomby tokoa ny kinovan'ny Midori granite, mitete be ihany ny fivezivezena ary tsy nijaly fanidiana tsy nampoizina aho satria matetika no mitranga amiko izany amin'ny mpitsidika miorina amin'ny qtwebkit.
Saingy indray mandeha, na dia manaraka ny lahatsoratra iray aza avy amin'ny Elementary ry zalahy, tsy afaka nanao flash hiasa ao amin'ity browser ity aho (64-bit). Ka Internet Explorer iray ihany no nanampy ahy nisintona Chrome.
Files (Files Phanteon):
Tena tiako ity programa ity, manao izay ilaina izy, manana ny karazan-jery 3 mahazatra, fomba fampirimana, lisitra sns. Manao izay mahitsy sy ilaina ilain'ny mpampiasa izy, na mihoatra izany na amin'ny kely. Ny hatsarany dia mampatsiahy ahy betsaka ny an'ny mpitantana ny OS X, fa amin'ity tranga ity, maivana kokoa ianao.
Ka +1 ho an'ity fampiharana ity.
Amin'ity tranga ity dia tsy afaka manome hevitra manokana aho, mbola tsy nampiasa an'io karazana fampiharana io mihitsy aho, ka hatramin'izao dia mbola tsy azoko ny fomba hanampian'izy ireo ahy.
Fahombiazana tokoa, raha oharina amin'i Gnome Shell, satria tsy misy antony tokony hananana menio mameno ny efijery iray manontolo. Izahay dia afaka mahita ny fomba fijery voalahatra araka ny abidia, ary koa ny fitanisana amin'ny alàlan'ny karazana fampiharana.
Tsy dia misy zavatra azo lazaina momba izany, izy io dia dika mitovy amin'ny fampiharana Ubuntu izay nifandimby nifototra tamin'ilay iray ihany avy amin'ny OS X. Mitovy ihany, manatanteraka ny asany izy ary ny zavatra tadiaviko ihany dia ny mamela ahy manapa-kevitra raha hametraka lahatahiry eo amin'ny birao. Izay nalamiko tamin'ny Gnome Tweak Tools.
Noheveriko fa ho hitantsika ihany ilay foibe vaovao nambaran'izy ireo tamin'ny farany, saingy tamin'ny farany dia sendra ilay hub misy rindrambaiko Ubuntu ihany aho.
Ny famitana ity fijery ity amin'ny distro etsy ambony, azontsika atao ny mamintina fa fizarana tsotra, madio sy tsara tarehy io izay manandrana misambotra ny mpampiasa manome fomba maquero tena, nefa mijaly amin'ny zavatra telo mahasosotra indrindra:
Fonosana rindrambaiko somary ela izay mitaky ny fampiasana PPA, na amin'ny Kernel na amin'ny MESA, ary koa amin'ny fampiharana tahaka ny Libreoffice.
Ny Libmutter 3.4 dia tsy nohosorana tahaka ny 3.8, izay manome fampisehoana sary somary ambany noho ny azony atao raha toa ka mifototra amin'ny zavatra vaovao kokoa.
Tsotra loatra ireo rindranasa ary tsy misy zavatra inoan'ny maro fa tena ilaina.
Kely dia kely amin'ny fandrosoana herintaona sy sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Os Luna Elementary, milamina ihany amin'ny farany! FAMERENANA
Lele! Nialoha ahy ianao 🙂
Na izany aza, ny Review dia tena tsara ho tsiro fotsiny. Miombon-kevitra aminao aho fa ny zavatra izay tsotra loatra dia mety hanelingelina. Notononinao i Geary (izay manala baraka azy fa tsy misy mpanohana POP3), fa ny zavatra mitovy amin'izany dia mitranga ihany koa amin'ny File Manager. Tena malahelo aho afaka mikaroka antontan-taratasy sy olon-kafa avy amin'ny fampiharana iray ihany, koa tsy tadidiko fa manana fitaovana amin'izany ny eOS.
Milamina ny kalandrie, saingy misy olana (farafaharatsiny farany nanandramako azy), tsy mampahafantatra anao ny zava-nitranga izany, ka raha tsy sokafanao dia tsy fantatrao na inona na inona.
Midori dia mbola manana zavatra tsy tiako. Ary tsy haiko amin'ny dikan-teny marimaritra iraisana, fa ao amin'ny Beta rehefa notsapaiko io dia tsy tiako ny hoe ny dinika maoderina dia manana na mitovy endrika amin'ny GNOME.
Ivelan'ity dia fizarana tena tsara omena ho an'ireo mpampiasa vaovao. Etsy ankilany, nanome tombony ahy ny fanombanana farany nataonao 😛
Ny hevitro dia voafintina tsara ao amin'ny fehezanteny farany nataon'i Franchesco:
"Kely dia kely amin'ny fampandrosoana mihoatra ny herintaona sy sasany"
Miarahaba ny ekipa Elementary aho fa raha fintinina dia efa fantatray izay misy any ary tsy gaga tamin'ity fandefasana ity izahay.
Somary diso fanantenana aho taorian'ny fahatsapana voalohany, nanana fanantenana betsaka tamin'ity distro ity aho, saingy amin'ny ankapobeny dia tiako ho an'ireo namako / mpanjifako izay tsy mahalala na inona na inona momba ny solosaina, ny tsara kokoa dia ny tsy tsotra ho azy ireo, ary tsy ho azy ireo ny openbox tsara na dia ho an'ny izaho. 🙂
ejmalfatti dia hoy izy:
Tsotra be, tsotra, ka misy "zavatra" tsy hita. Ho ahy izy ireo dia antsipiriany kely, izay navela, izay tsy mahatonga azy io hiasa ho ahy. Fa tiako be ny estetika, nefa na izany aza tsy mandeha izy io, toy ny hoe Manjaro XFCE.
Valio i ejmalfatti
hakitroky dia hoy izy:
Ny tena manelingelina ahy indrindra dia ny tsy ahafahanao manampy ny hitsin-dàlana fitendry, fa ovao ihany ireo efa voatendry.
Ho an'ny ambiny, tena tsara izy io ary tena mandeha haingana tokoa, fifaliana raha oharina amin'ny Unity, Kde na i Xfce aza. Ho an'izay irery dia efa mendrika ampiasaina izany.
Raha ny momba ny rindranasa dia tsy dia misy olana firy, apetraka tsy misy fahasarotana daholo izy ireo.
Fahatsorana, hafainganam-pandeha ary fomba fahitana tsy manam-paharoa.
Mamaly ny dity
Ajanony ary ny bokotra kely indrindra!?
Tsy maninona ianao indraindray mihena kely avy amin'ny kisary panel fa raha manana ny totozy eo an-tampon'ny efijery ianao dia fampijaliana, tsy maintsy midina hatrany ianao mba hampihena ny varavarankely!?
Mahafinaritra izy io, mifangaro tsara ary ho an'ny olona toa ny rahavaviko izay mampiasa maivana ny milina, mifanaraka tsara izy io, saingy "noana" isika: Maya (ny kalandrie) dia tsy mifanaraka amin'ny kalandrie Google na amin'ny serivisy hafa .. o_O Rehefa miditra amin'ny rahona amin'ny alàlan'ny fomba samihafa ny datao, dia ilaina ny fampifanarahana ny zava-drehetra (raha ny finday smartphone, ny solosaina finday ao an-trano sy ny birao miasa), tsy ho faty ny birao fa ny Cloud kosa manatsotra ny fiainantsika betsaka.
Mitohy ihany koa ny manana olana mitovy amin'ny Ubuntus / Debian: ny famoahana cyclical dia feno fampiharana taloha (GIMP 2.6? Andao olona, ​​mampiasa 2.8.1 be dia be aho ary misy fanatsarana maro izay tsy misy ao amin'ny Precise / GIMP elementososy). Izay lazain'i Francesco momba ny PPA dia io mihitsy no nanalavitra ahy tamin'ny Ubuntu, rehefa manomboka manova ampahany amin'ny rafitra ianao dia manjary tsy milamina ary lottery ny fanavaozana.
tena tsara ny elementalyOS, eny, saingy ny fanasongadinana ny endri-javatra sasany dia manaloka azy loatra.
Manaiky ny isa 6/10 aho
Ny fialan-tsiny amin'ny bokotra Minimize dia ny fampiharana toa heverina fa misokatra sy mihidy haingana be ka ny fanokafana sy ny fanidiana dia misy vokany mitovy amin'ny fanalefahana. Marina fa azonao atao ny mampihena kely ny kisary dock, fa ndao ...
nikot dia hoy izy:
mametraka famafana fototra sy fanafody masina. miakatra indray ianao ...
Mamaly an'i nicot
Ity misy rohy ahafahanao manampy ny bokotra minimize.
Manantena aho fa tsy spam.
RAKOTONDRASOA (@rakotoarisoa) dia hoy izy:
Ho an'ireo izay manao fizahan-toetra hahitana raha mijanona amin'ity fizarana ity aza aho dia manome toky ahy ny handalo: http://www.elementaryupdate.com/ izay ahafahanao mametraka ny POS vondrom-piarahamonina elementOS ahafahanao mametraka ny Elementary Tweak, Wingpanel Slim ary lohahevitra maro samihafa hanamboarana azy ankoatry ny zavatra hafa ...
Mamaly amin'ny pEpE (@valdezpepe)
Misaotra ny Internet, tsy fantatro izany, tokony apetraka ao amin'ny paositra mihitsy. Raha ampiana ny bokotra kely indrindra.
Richr dia hoy izy:
lahatsoratra tena tsara izay nahatonga ahy hamonjy toerana amin'ny kapila mangirana. 🙂
tsara raha hojerena tsara ny solydxk amin'ny kininy kde dia hankasitrahana fatratra
Valiny tamin'i Richr
Izaho dia nanana fifandraisana sarotra tamin'ny sekoly fanabeazana fototra, nanomboka tamin'ny fitiavako azy ka hatramin'ny fankahalana azy. Ny tsikera nataoko dia nifantoka hatrany tamin'ny tsy fisian'ny fanaingoana (sary masina, lohahevitra totozy, lohahevitra GTK, sns.) Satria mieritreritra aho fa, ankoatry ny zavatra hafa, dia izany no atao hoe Linux: ny fanaovana ny birao ho anao; na izany aza, ny fikolokoloana ny estetika dia nahatonga ahy te hampiasa azy io, na dia mazava ho azy aza fa ny mpampiasa vaovao no tanjon'ny distro kokoa noho ny liona an-dranomasina taloha toa ahy.
Amin'izao fotoana izao dia nahita olana aho fa raha manandrana mametraka skype aho dia te hamafa ny tontolon'ny birao manontolo ...
Ampiasao ny DPKG (raha toa ka misy console, mazava ho azy), ary aza miala amin'ny fandefasana ny birao manontolo amin'ny devoly.
Eny, nametraka azy tsy misy olana aho.
Ary izaho, rehefa avy nanamboatra ny ratsy tao amin'ireo loharanom-pahalalana.list .., noho ny antony tsy nitovizan'ny repositories ubuntu.
Ny marina dia tena faly aho rehefa hitako fa efa navotsotra ny eOS, tiako ihany koa fa nanao famerenana haingana izy ireo, ankehitriny, manana fisalasalana roa aho:
1) Inona no kinovan'ny Ubuntu mifototra amin'izany?
2) Mampiasa Ubuntu be dia be aho (ao an-trano sy any am-piasana) .Morisika ny hiova amin'ny Ubuntu ho eOS ve ianao?
Miarahaba anao tsara, Patricio.
1- Momba ny andiany 12.04 🙂
2- Ho ahy eny.
1.- Aleo ihany manohy amin'ny Wheezy ary mampiasa Ubuntu Server.
2.- Mety hisintona ny Elementary Shell PPA aho ary avelao hiala sasatra ny GNOME Fallback-ko.
Ny zavatra miavaka dia ny fahombiazan'ny fampidirana ny qt miaraka amin'ny lohahevitra ambaratonga voalohany, izay tena tsara.
Tsy tiako izany fa mifototra amin'ny gnome3, na dia toa tsara lavitra noho ny gnome3 aza izany. Raha nifototra tamin'ny kde mahay izy ireo dia apetrany ... xd.
Mikasika ny Midori sy ny Flash dia tiako ny milaza fa tsy maintsy ampodirina amin'ny safidy EXTENSIONS izy io.
Raha ny filazanao azy, raha nametraka azy ianao ary tsy afaka mahita horonantsary na sary mihetsika amin'ny Midori, dia satria tsy nasianao marika azy io ho mavitrika amin'ny safidin'ny EXTENSIONS.
Manoro hevitra anao aho mba hanomeo fanandramana ity mpitety tranonkala mahafinaritra ity. Tena maivana, tsotra ary tena haingana. 😉
Voamarika ary narahiko ilay lahatsoratra http://www.elementaryupdate.com/2013/05/flash-in-midori-web-browser.html
Fa mahazo lesoka aho ary tsy mandeha io.
Aleoko apetraka eo amboniny i Iceweasel hialana amin'ny olana amin'ny fampisehoana horonantsary HTML5.
Miorina amin'ny Lubuntu ??? Ka milaza ve ianao fa mifototra amin'ny LXDE?
Tena tsy hitako mihitsy ... ny Elementary dia tsy mifototra amin'ny LXDE, raha ny marina dia manana Shell eo ambonin'ny Gnome 3.4 antsoina hoe "Pantheon" izy io ary miaraka aminy andianà fampiharana novolavolain'ny developer Elementary .. Nefa mbola Gnome 3.4 miaraka amin'ny akanjo vaovao izy io.
Ary raha toa ny iray amin'ireo zavatra nandiso fanantenana ahy dia ny fahanterany io amin'ny resaka fonosana ... kernel 3.2 a libreoffice 3.5 huy no no no ....
Ny vahaolana tokana sisa tavela dia ny fananana ireo paipa hanatsara azy io, koa inona no ilana fampiasana ppas hampiasa kernel na fonosana amin'ny endriny vao haingana indrindra rehefa misy Ubuntu 13.04 miaraka amin'ilay fonosana nohavaozina?
Raha fintinina ... Mampiasa ny fanabeazana fototra ny olona fa tsy ho an'ny teknika, satria toa mampihomehy ny fampiasana ppa hananana fonosana bebe kokoa ankehitriny rehefa afaka mametraka Lu, Xu, Ku, Ubuntu 13.04 na 13.10 mora foana ianao (raha izany dia maika be) ary mankafy ny tontolon'ny Linux ankehitriny
Elementary OS no nofinofin'ny zaza Linux rehetra…. fa ny rafitrao dia mitovy amin'ny Mountais Lion OS X araka izay azo atao
pufff ajajaj lazao amin'ny chorrera olona nametraka an'ity distro ity satria mitovy amin'ny MAC ny fahitana azy
Eny, tiako ny GNOME 3 taloha ary niverina ho faty tamin'ny fitsiriritana aho hahatsapa fa tsotra ny Debian GNOMe 3.4.
Um ... nilaza izy fa mampiasa ny distro Lubuntu fa tsy ny eOS dia miorina amin'ny Lubuntu
Marina izany !! Tsy tsikaritro ... Namaky haingana be aho ary nahatakatra fa nilaza izy fa ny elemental dia mifototra amin'ny Lubuntu xD ahahahaha
miala tsiny !!
Ary satria i Lubuntu (raha ny hevitro) no tsiro mandry indrindra amin'ny fianakavian Ubuntu, dia tsy misy olana mihitsy
ok voavela ahahaha!
Efa novakianao ve ny lahatsoratra XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? Nilaza aho fa mampiasa lubuntu ... fa tsy ny fototra element dia miankina amin'ny lubuntu.
Raha ny tokony ho izy dia tsy misy mampiasa ny User Agent toy ny teo aloha….
Ny logo chrome poakaty miaraka amin'i Tux no hitako eo akaikiny xD
Ahaha tamin'ny farany dia reraka ny olona nanitsy ny mpampiasa XD
Eny, ary amin'ny faran'ny andro dia mandeha tsara ilay fanitarana nasehon'izy ireo tao ho an'ny Chrome, ny zavatra ratsy fotsiny dia rehefa manokatra Gmail ianao dia tsy manokatra azy io, noho izany dia tokony hofarananao ny extension mba hahafahanao miditra ao amin'ny kaonty mailaka anao ahahahahaha
Aleoko mijanona toy izao ...
Na dia tokony misy safidy tsara kokoa aza eto amin'ny tranonkala ahafahanao misafidy an-tsary ny distro izay tianao hiseho ao amin'ny mpampiasa mpampiasa
Tsia, tsy nilaza na taiza na taiza fa nifototra tamin'ny LXDE. Etsy ankilany ny Ubuntu 12.04 dia LTS izay manome azy fitoniana, raha ny marina dia mieritreritra aho fa ny fonosiny dia mitovy amin'ny Wheezy ankehitriny, na izany aza io zava-misy io dia tsy manakana antsika te-hametraka fonosana vaovao, na tsy ilaina izany na noho ny versionitis. Ny tena izy dia ho an'izay misy ppas na seranam-piaramanidina, izay manome fonosana vaovao anao nefa tsy mila sorona fitoniana, indrindra raha manana tontolo mahomby ianao
Debian Wheezy dia malefaka kokoa amin'ny resaka fonosana vaovao (afa-tsy amin'ny fametrahana Steam, mazava ho azy).
Fenriz07 dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara "
Valiny tamin'i Fenriz07
Te hanampy ihany koa aho fa navotsotra koa i Sabayon 13.08
Izy io dia miaraka amin'ny kernel 3.10.4, GNOME 3.8.4, KDE 4.10.5, MATE 1.6.2, Xfce 4.10, LibreOffice 4.1, systemd ho fanombohana default, manamboatra UEFIBoot, sns.
Ny client client dia mampatsiahy ahy ny Thunderbird tsotra fotsiny hehehe
Fa maninona ianao no tsy afaka manova ny habetsaky ny translucent ao amin'ny Terminal raha tsy mandalo amin'ny elementupdate.com!
Tsy maninona aho raha manome fizarana manokana ny fizarana, fa _ manala ny fahaizana manamboatra ny rafitra_ ho an'ny mpampiasa herinaratra no maha-bado.
Heveriko fa mihazakazaka haingana kokoa sy malama kokoa noho ny Elementary i Xfce, farafaharatsiny ao amin'i Manjaro sy i Debian izay ampiasaiko. Toa hitako fa mitondra endrika hafa ity distro ity. Ny iray izay hatolotro ho an'ny mpampiasa vaovao dia Voyager = http://voyager.legtux.org/ , mifototra amin'ny Xubuntu, ankoatry ny tena tsara tarehy, dia tena ilaina sy miasa izy io, izay sekoly ambaratonga voalohany toa tsy hitako.
Ny fiheverana nomeny ahy dia toy ny vokatra indostrialy izy, fonosina tsara sy manintona, saingy rehefa avy nampiasaina dia tena nandiso fanantenana.
Mamaly an'i blackbird
Araka ny nolazaiko tamin'ny lahatsoratra hafa, homeko fotoana ity rafitra ity, toa tsara tarehy sy mitandrina tsara amin'ny endriny hita maso izy io. Hesoriko ny linux mint 15 ary hapetraka os os fototra.
distro hanehoana tantara iray hoe ahoana no mety hahitana endrika mahafinaritra an'i linux
Heveriko fa ny zavatra tokana tsy hita an'i ElementaryOS ho kopian'ny OSX araka ny fikasan'Andriamanitra dia ny biraovana ao amin'ny tontonana ambony 😀
Ny fanontaniana, ny fahitako azy, dia ... nahoana izy io no mila atao kopia? Moa ve ny GNU / Linux tsy azo ovaina sy azo ampiasaina hamoronana fizarana amin'ny toetranao manokana?
Tsotra be ny valiny, maro ny olona tia (izaho koa), ny paoma no mijery look
Eny, mazava ho azy, tsy isalasalana fa. Tiako ihany koa ny zavatra sasany momba ny fisehoan'ny Mac, ny hafa tsy. Raha tiako ny antsipirian'ny Win7, ary ny sasany tsia.
Ny tena izy dia, eo anelanelan'ny fananana "rivotra", na fitaoman'ny Mac, ary ny fanaovana kopia dia lasa lavitra. Ny fanaovana kopia zavatra efa vita, tsy nitondra na inona na inona, dia toa tsy fahampian'ny famoronana.
Ary ny tranga misy an'io distro io, saika ny hany zavatra manome anjara biriky dia ny, ny endrika, amin'ny zavatra hafa rehetra, tena kely fotsiny ny fahamarinana.
Kirl dia hoy izy:
Tsy dia ratsy loatra izy io, ny endrika hita maso amin'ny eOS dia manome rivotra MAC OS X, saingy lavitra be izany.
Ny bara ambony dia tsy misy ifandraisany amin'izany, na ny sary masina, ny faran'izay avo lenta, ny kisary akaiky, azoko atao ny manohy fa tsy mamita.
Valiny amin'i Kirl
Miaraka amin'ny fahaiza-mamorona be dia be izy ireo dia afaka namorona tontolo birao (toa ny Gnome, miaraka amin'ireo rindrambaiko manokana sy ny sisa), ary ny vokany dia ho tsara kokoa.
Mety ho niorina tamin'ny 2017 xD ianao
Elementary dia manana ny fampiharana azy manokana: tabataba, Pantheon-Files, Scratch, Maya, Pantheon-Terminal sy ny hafa, miampy Midori sy Geary dia mifamatotra amin'ny ekipa Elementary, noho izany dia tsy ny fisehoana fotsiny no tena izy fa tena mametraka faniriana be tokoa ry zareo.
Ny marina dia, ary tsy nolazaiko izany teo aloha, dia ny tsy fetezako fa ny distro na Shell tsy mitondra ny bokotra 3 ao am-baravarankely miaraka amin'ny alàlana na fahefana aiza no nesorin'ireo Elementary na Gnome Shell azy ireo?
Moa tsy mbola manana ny bokotra 3 eo am-baravarankely ve ny Mac OS X, Windows, KDE, Xfce, kanelina sns?
Tsy misy zavatra hafa noho izany, satria ny bokotra 3 dia tsy tafiditra ho fenitra, tsy mila Elementary na Gnome Shell intsony aho, ary aza miteny amiko fa mahazo pee io, fantatro, ny lazaiko fa tsy mila esorinao izy ireo .
Na ny GNOME 3.4 Fallback misy bokotra telo aza. Hakamoana izaitsizy ny an'ny mpamorona OS Elemantary.
Puff eny !! Ny fandehanana any amin'ny Tweaks sy ny fisafidianana ny fisehon'ny bokotra dia mandany fotoana….
Tsy natao ho an'ny rehetra ... adala ireo avy any amin'ny ambaratonga voalohany!
Charlie E. Liarson dia hoy izy:
Na dia eo aza ny lesoka amin'ny rindranasa dia toa lavorary amiko ny rafitra, faly amin'izany aho. Ireo bitsika sy tsy fahampian'ny pitsopitsony ao amin'ireo rindranasa, heveriko fa aingam-panahy ho an'ny programa izany. Raha ny tena izy dia heveriko ho latabatra tsara indrindra ho an'ny solosaina finday sy ho an'ny trano izany ary ho an'ny asa dia tsy ratsy velively. Milamina izy, haingana, tsotra, maivana, madio ary tsara tarehy. Heveriko fa tena ho faly amin'ny Elementary OS aho mandritra ny taona sisa ka hatramin'ny 2014.
Valiny tamin'i Charlie E. Liarson
Mazava ho azy fa tsy afaka tian'ny rehetra izy io. Toa ezaka tsy maintsy ankasitrahana ny fahitako azy: ny fahazoana birao izay notapahan'izy ireo mihoatra ny tsotra, fa amin'ny fizarana izay ho an'ny mpampiasa "mahazatra" dia mihoatra ny ampy. Misy zavatra tokony hosamainty, saingy nahavita ny fombany manokana izy ireo .. .. inona ny fizarana, afa-tsy ny Ubuntu, afaka milaza izany?. Ny lesoka dia ny nanombohan'izy ireo ny tampon-trano, ny fiankinan-doha amin'ny toeran'i Ubuntu efa somary lany andro sahady (raha toa ka nifanaraka tamin'io ilay izy, dia tsy ho meloka izany). Ny zava-dehibe dia ny zavatra sarotra indrindra no vita. Ireo mpampiasa ihany izao no tsy hita (io no iray amin'ireo tolo-kevitra amin'ny tontolo iainako) ary mandeha manadio sy manatsara zavatra. Angamba amin'ny ho avy tsy dia lavitra dia azo atao mifototra amin'ny Arch na Debian Testing. Ataoko fa nilalao azy ireo soa aman-tsara izy ireo, miorina amin'ilay kinova Ubuntu. Vintana.
Ho ahy, raha misy karazana switch haingana hiova mankany amin'ny Gnome Shell tsy misy fotony, dia hampiasaiko io. Ny ho avy no hilaza, fa tsy amin'ny tany. Ny Gnome 3 fampiharana vaovao dia matanjaka kokoa.
Ho ahy ny ezaka fizarana hahatratrarana tontolo iainana tafiditra tanteraka dia tokony ho zava-dehibe. Ny tsirairay amin'ireo sary masina sy ny fampiharana dia mifanentana fa tsy mifandona ary eo amin'ny tranokalanao daholo dia odyssey izay tokony hiasan'ny mpampiasa. Ary tsy tokony ho toy izany. Izay no antony itiavako an'i Gnome, satria amiko dia io no tena mamela azy tsara sy eny an-dàlana, miaraka amina andiana fampiharana tafiditra tanteraka… ary izany no mahatonga ahy hiloka amin'ny distro ahy manokana. Tsy haiko ny momba anao…. saingy manahirana ahy ny hoe, na tsara toy inona aza ny fonosana, dia mahita olona mihira foana ianao…. na mizaha ny tsinay ny distro hahitana kisary avy amin'ny kinova era hafa aorian'ny kinova. Na Windows aza tsy mikarakara an'io. Toetran'ny kalitaon'ny Apple.
«Ho ahy ny ezaka fizarana mba hahatratrarana tontolo iainana mifangaro tanteraka dia tokony ho zava-dehibe. Ny tsirairay amin'ireo sary masina ao amin'ny rafitra sy ireo fampiharana dia mifanentana fa tsy mifandona ary samy eo amin'ny toerany avokoa dia odyssey izay tokony hasain'ny mpampiasa. »
Manaiky aho, izany no iray amin'ireo antony nanodinkodina ahy foana momba ny distros GNU + Linux, izay, novolavolain'ny coder, dia tsy miraharaha ny endrik'izy ireo, amin'ity lafiny ity sy amin'ny fampifangaroana eo amin'ireo fampiharana (Granite, sns.) Dia izay mamiratra tokoa.
Raha mbola manao izany amin'ny Arch na Debian izy ireo dia mety tsy zava-dehibe izany, raha tsy diso aho ao amin'ny Arch _tena tena ilain'izy ireo ny birao fototra_ ary ny hany zavatra nandrasan'izy ireo hivoaka dia ny hahatratrarany ny toetrany milamina. Tsy hain'izy ireo ny fomba hiatrehany ny fiankinan-doha amin'ny GTK3 amin'ny kinova samihafa, fa raha vitany ny mampandeha azy dia tanjona lehibe 😀
Tiako ilay hetsika. Miezaka ny misaraka amin'ny "fandraharahana toy ny mahazatra" izy ireo ao amin'ny distro Linux, saingy mazava fa mpamorona kokoa noho ny mpandahatra programa izy ireo.
Tena tsara, na dia tsy mihoatra ny gNewSense amin'ny fahanterana aza, fa ny kinova farany dia miorina amin'ny Debian Squeeze.
Toy izany koa, io no akorandriaka goavana sy kanto indrindra hitako hatreto, na dia misafidy ny hanohy hampiasa ny fallback an'ny GNOME 3.4 ananako ao Wheezy aza aho.
Tsy inona izany. Ny Nautilus avy amin'ny GNOME 3.8 / 3.10 no tena halako indrindra, satria tsy afaka mampiasa ny bara fisakafoanana ahafahako mandeha amin'ny safidy mandroso kokoa.
Ho an'ny bokotra 3 dia manohana anao am-pahatsorana aho.
Tsy mbola tiako io distro io, fa mbola maniry ny hahita vintana aho ary manantena fa hitondra ny olona hanakaiky kokoa ny tontolon'ny Linux ary koa ny Ubuntu.
Ry zalahy, aho raha milaza ny marina aho, raha ny hevitro Elementary OS Luna, no antenaiko amin'ny Ubuntu 10.04 ... fa tsy Unity. Firaisankina, tena tsara izany ... raha manana solosaina tsara ianao, matanjaka ary maharaka ... fa raha tsy gamma antonony na ambany kosa ny solosainanao, pf ... tsy misy hevitra.
Betsaka no mitaraina ny amin'ny maha-lany andro ny fandaharan'izy ireo, fa raha ampitahaintsika amin'ny gNewSense dia maro no hisintona izay voalaza satria ny dika an'io distro vaovao io dia miorina amin'ny Debian Squeeze, ka tsy misy dikany izany.
Milamina ihany ny tontolo iainana.
Ny tsy mahomby amin'ny ankapobeny dia ny fampiharana sasany. Ny mpitety rakitra dia mbola tsy ampy kely (na dia nihatsara be aza).
Farafaharatsiny ny mpitety rakitra dia manana zavatra betsaka kokoa noho ny GNOME 3.10 Nautilus ankehitriny.
entel dia hoy izy:
Fa i Nautilus ve afaka mitondra zavatra kely kokoa? Ao amin'ny Gnome 3.8 dia tsy maintsy nosoloiko Nemo satria tsy nisy azo natao.
Aiza ny feso feso….
Raha ny Elementary, tena tsara tarehy sy tsotra izy io saingy ny fampiasana azy dia apetrako ny Ubuntu na ireo variana ao aminy ary mahazo izany vokatra izany aho amin'ny fanovana endritsoratra, kisary, lohahevitra ary dock.
Mamaly amin'i entel
Tsy haiko, aleoko kokoa ny mimonomonona kokoa amin'ny compiz .., noho izay antony izay dia tsy nametraka ubuntu aho.
Mampiasa fallback GNOME 3.4 aho izay tonga tamiko tao amin'ny Debian Wheezy, ary mbola ilaina ihany ny Nautilus.
Heveriko fa ny fisehoan'ity karazana distrô ity, mifantoka indrindra amin'ny "traikefa ho an'ny mpampiasa" (fanabeazana fototra, chakra, sns.) Dia mampiseho fa ny fotony (kernel, tranomboky, sns.) An'ny Gnu / Linux dia novolavolaina tsara ho an'ny sasany Atokana fotsiny ho an'ny "ambonin'ireo", hitako fa famantarana tena tsara izy io, salama tsara ny tontolo iainana. Salama.
Azavao ny olana sasany nipoitra:
-Ny fizarana dia fototra kokoa noho izay tadiavin'ny mpamorona, fa tsara kokoa ny manomboka kely sy mitombo toy izay manandrana mamorona goavambe ary tsy hahavita mandrakizay. -Momba ilay lahatsoratra, Geary ny programa mailaka dia novolavolain'i Yorba, fa tsy ny mpamorona ny Elementary. Ny fikarohana dia voalahatra ho an'ny kinova manaraka amin'ny programa, saingy mandeha amin'ny diany manokana izy ireo.
-Nahafantatra ireo mpandrindra fa efa antitra ireo trano famakiam-boky, tsy manafina izy ireo fa tian'izy ireo ny Arch ary ny sasany amin'izy ireo koa dia mandray anjara amin'ny Arch.
-Ankehitriny dia notsikeraina be ny olona noho ny fahatsorany, saingy fototra io, ny manaraka dia ho tsara kokoa ary afaka iray na roa taona dia hihorohoro ny Ubuntu.
Mahaliana Tianao ve ny Arch? Akory ny hatsarany raha nanao a fototra como el Manjaro, izany hoe, momba andohalambo fa amin'ny installer mora sy ny hafa 😀
… Ho anao rehetra, teny manokana avy amin'ny Debian iray izay nahita ny mazava, ry rahalahiko! xD
Hanao sary hosodoko aho amin'io fehezanteninao io 😀
Raha manao installer-forme forme toa ny OpenBSD ny mpamorona ny Arch, dia vao maika ny antony hametrahana Arch. Amin'izao fotoana izao dia mbola manandrana ny masinina virtoaly aho.
Ampiasao ity dia mandehana:
mandeha amin'ny diany manokana izy ireo
Tsy miady hevitra aho hoe ..., amin'ny tahan'ny sifotra xD
Herintaona na roa izay mangovitra i ubunut ..., ny marina, na dia tsy mpampiasa ubuntu aza aho ary mahita fa manintona an'i mir sy ny firaisankina vaovao ny ubuntu, miahiahy aho fa ity distro ity dia mety hihoatra ny ubuntu, dia io no linux mint tsara tarehy kokoa saingy tsy misy zavatra hafa.
4 andro no nampiasako azy ary hatreto dia mandeha tsara daholo ny zava-drehetra. Malahelo azy aho ary raha ny fahalalako ireo mpamily tompona trano dia tokony hiasa tsara kokoa noho ireo tsy andoavam-bola fa amin'ity distro ity ny mifanohitra amin'izay no mahafaly ahy 🙂
Mitovy amiko ihany no mitranga amiko, mahafaty ahy ireo mpamily tompony, etsy andaniny tsy maninona ireo afaka.
«Voalohany indrindra dia mahita tontolo Desktop isika, madio, tsara tarehy ary tsotra, mitovy amin'ny an'ny Mac OSX.
Hatreto dia tsara ny zava-drehetra amin'ny cd mivantana, mandra-pahatsapanao fa tsy manohana tsara an'i Kernel 3.2 sy ny tabilao 8 ny fitaovanao, ka nanomboka nametraka ny distro aho ary avy eo nampiasa xorg edgers ppa hanana ny latabatra farany indrindra, ary Kernel 3.11 avy amin'ny Ubuntu Kernels ppa. »
Ampiharo ireo dingana 2 tsotra ireo ary tsy mampino ny valiny ... manidina ny rafitra ... MANERA ... mazava ho azy, nanao fanitsiana aho, nanala ny vokany sns ...
Nandritra ny 5 taona mahery no nitantanako an'i Debian (ilay milamina foana), saingy tamin'ny solosaina finday dia somary miadana aho (akorandriaka) ka nanapa-kevitra ny hanandrana aho hijery ny fomba fitondran-tenany ary ny marina dia tiako be izany, na ho an'ny hafainganam-pandeha, manao ahoana ny fahazavana ary ny fitandremana ny interface. Apetraho amin'ny PC izao, andao hojerentsika raha farany.
PS: ny tsy hitako dia ny fanovana ny menio Applications, toy ny famafana na fanovana sokajy programa, raha misy mahalala….
Raha ny amiko, tsy nila nanova kernel na rakipeo horonantsary aho, na dia afaka nanandrana nanavao azy ireo aza aho mba hahitana izay mitranga.
Ary izao no heveriko fa ilaina amin'ny fampiasana andavanandro dia ny manampy ireto PPA ireto:
birdie-team-stable-precise.list element.list.save loneowais-fogger-precise.list patches.list.save versable-elementary-update-precise.list.save
cassou-emacs-precise.list.save inkscape_dev-stable-precise.list nuvola-player-ilderers-stable-precise.list.save tombeckmann-ppa-precise.list.save
element.list libreoffice-libreoffice-4-1-precise.list.save patches.list versable-element-update-precise.list
Amin'izany ary ny eOS rehetra dia tsy manana mpijery sary mendrika ary tsy maintsy nametraka an'i Gwenview aho - nono…
Ny zavatra nataoko voalohany rehefa nametraka azy aho dia ny manaisotra ireo programa entin'izy ireo ary apetrakao ny vlc, chrome, synaptic, thunderbird, dolphin ary Libreoffice 4 ary ny marina dia afa-po aho
Anisan'ireo zavatra marobe, tsy manana mpitantana varavarankely izy izay mamela ny hitadidy ny toerana teo aloha sy ny haben'ny fikandrana fisokafana samihafa.
Averiko ihany: tsy misy mpijery rakitra mamela anao hanova rakitra an-tsary, noho izany dia mila mampiasa GIMP ianao, izay mitovy amin'ny famonoana lalitra amin'ny marmara.
Ny safidy hafa dia ny fampiasana ny zotra baiko (imagemagik, sns.) Saingy mazava ho azy, mifanohitra mivantana amin'ny filozofia amin'ny fampiasana sy lasibatr'ireo mpampiasa eOS izany.
Tahaka ny Alfa kokoa ny fisie noho ny maintso ary, amin'ny fahamarinana rehetra, ny Dolphin dia mampiseho ny fahafaha-miasa tanteraka rehefa ampiasaina miaraka amin'ny fampidirana Nepomuk - na dia tsy misy fampidirana toy izany aza dia mbola io no mpitantana rakitra an-tsary tsara indrindra amin'ny sehatra rehetra.
Olana intrinsika iray hafa an'ny mpitantana ny varavarankely GNOME na eOS: rehefa manampy tsoratadidy ao amin'ny Chrome / Chromium isika, satria tsy mahatadidy ny haben'ny windows ny rafitra, dia mila manitatra ny varavarankelin'ny tsoratadidy amin'ny tanana ianao isaky ny mandeha.
Mpihaino: mikendry ny hisolo ny Totem amin'ny interface madio nefa tsy manana ny ampahadimin'ny fampiasa azy - manohitra indray ny fanamafisana.
Ny fomba KDE SC dia azo ampiharina kokoa: «manome anao trillion trosa (ok, mety tsy dia maro loatra), dia ampiendrehoo araka ny sitrakao ny interface», ka raha aleon'ny olona ny interface minimalista dia azony atao izany nefa tsy very ny herin'ny ny fampiharana, amin'ny eOS dia esorin'izy ireo mivantana ireo toetra noho ny fanatsorana 'ilaina' - tsy zava-poana Tweaks fototra tonga hamaha ny sasany amin'ireo lesoka ireo.
Ohatra iray amin'ny fanamafisana ny endriny dia ny Shotwell: miasa ho mpijery rakitra an-tsary tsy miovaova izy, manana safidy sarotra amina taonina fa tsy ilay manova habe sary iray - Yorba, mitsentsitra izy ireo !!!
Terminal Pantheon: terminal be loatra. Fa maninona no mamerina mamorona ny kodiarana raha afaka mampiasa GNOME na Xfce ianao? Ambonin'ny fivoarana vaovao dia tsy misy ny fiovana mora foana amin'ny loko, ny haavon'ny mangarahara na ny fizarana ny efijery amin'ny terminal maro toy ny amin'ny Yakuake na Terminator.
Eny, ny loko azo ovaina amin'ny alàlan'ny dconf amin'ny fomba tsy misy hadalana: https://gist.github.com/davidgomes/5162998
Mahaliana ny hevitry ny eOS, maivana ny rafitra ary manintona ny saina betsaka mifototra amin'ny Ubuntu, manana hevitra tsara izy (Wingpanel, Gazette) saingy mila matotra izy io ary maro ny milaza fa ho an'ireo mpampiasa tsy solosaina no kendrena.
Raha ny ahy, amin'ny maha mpijery sary ahy dia mampiasa gthumb aho, novaiko ny mangarahara tao amin'ny terminal avy amin'ny dconf, ny Tweaks fanabeazana fototra dia tsy niasa ho ahy mihitsy, angamba satria nesoriko ny Pantheon Files, zavatra iray tsy tokony, ny marina dia tsy mila an'izany izao satria manohina rakitra hafa ary ny zavatra rehetra dia araka ny itiavako azy
jesus jimenez dia hoy izy:
Salama namana, natomboka tamin'ny linux niaraka tamin'ny distora ny Fedora 14 ary nijanona mandra-pahatongan'ny 17 taorian'izay dia nanana olana maro tamin'ny carte de graphierako aho ary be ny faharetako, taorian'izay dia nanapa-kevitra ny hanandrana ubuntu aho ary tsia, hadisoana izany, aleo mifindra ihany amin'ny windows 7. Ankehitriny miverina amin'ny linux aho miaraka amin'ny Fedora 19 ary tsia, miadana loatra ny vokany ary misy fiantraikany amiko izany, ireo olana momba ny mpanonta izay afaka nanonta taorian'ny fanandramana fametrahana maromaro. Handeha amin'ny Ubuntu 13.04 aho ary mandeha haingana ary tiako izy io fa mijery horonantsary hitako ity distro Elementary os luna ity dia tamin'ny beta ary tamin'ny andro nisintomako azy, izay tamin'ny vao mangiran-dratsy dia efa nilamina izany. Nametraka azy aho ary tsy nanome olana momba ny carte graphique, mora ny mametraka adobe flash player ary hitako fa tsy niasa hijerena horonantsary ilay browser midori ho an'ny 64 bitika ary tiako izao, mijery horonan-tsary aho, ampanjifaiko ny rafitra, miasa aho ary haingana be ny zava-drehetra, tsy hiteny aho hoe io no tsara indrindra, saingy mbola tsy ampy ny OS nefa amin'izao dia mandeha tsara aho. Manantena aho fa hihatsara, arahaba namana.
Valio Jesosy jimenez
Salama, napetraka ny fanabeazana fototra ary tena afa-po aho, saingy misy olona afaka manazava amiko ny fomba hanampiana ny ppa hanavao ny kernel
Tsy ppa izany, raha mila mankany amin'ny kernel mainline ubuntu ianao, tadiavo ny fizarana isan'andro, ary ampidino ny lohan'ny kernel lohateny generika, amd64 ary kernel generic sns ary apetaho 1 by 1 izy ireo
MaikO dia hoy izy:
Izaho, mpampiasa farany ... newbie amin'ny linux, lazaiko tsotra ... feno fankasitrahana noho ny ezaka lehibe, ny fotoana ary ny fanoloran-tena azon'ny olona toa an'ity bandy ity sy izay distro mety tsy misy tambiny vola, manandrana manao linux zavatra manintona sy miasa ho an'ny olon-tsotra ... fa hitako ihany koa hoe firy ny olona MANANJAKA sy MANAIKY ny asany; raha tokony hisaotra ny FISAORANA sy FANASITRANA ireo zavatra tsara maro ananan'ny Rafitra misy azy ireo, amin'ny farany, toy ny 95% na mihoatra, na angamba tsy misy olona afaka maka vola am-paosy avy am-paosiny hanolotra ity karazana ezaka ity ... ary araka ny nolazaiko teo am-piandohana Na dia amin'ny fahitako ny linux novice vaovao sy ny tsy fahalalana rehetra momba an'io lohahevitra io ihany no azoko lazaina «Endrey ny hatsaran'ny Elementary! Ny farany avy any Manjaro dia mahavariana !!, »Kanelina tena ahazoana aina miaraka amin'ny Linux Mint !! Debian dia Debian !!! distro tiako indrindra !! na izay azon'ny olona lazaina momba ny distro-ny ... fa tsy mikiakiaka toa zazavavy na mimenomenona be momba ny asa ratsy mitady fahasembanana !! raha tsikera manorina izany dia tongasoa daholo! fa tsara toy inona moa ny fanampiana ireo olona ireo na amin'ny kaody hanatsarana ny vokatra na sns ... Rehefa tonga io andro io dia mieritreritra aho fa ho Linux, na inona na inona isan'ny distros, ny rafitra miasa tanteraky ny fiarahamonina misy azy ... Ity ny hevitro momba azy
Valio amin'i MaikO
Tsy nisy na dia distro iray aza niasa tamin'ny kahie, nisy ny nametraka, fa aorian'ny famerenana / hanidiana ny tontolon'ny sary dia hiala, fikorontanana kernel tsy tambo isaina, amin'ny hafa tsy azoko atomboka akory. Raha ny mifanohitra amin'izay dia ny mifanohitra amin'izay no izy, niasa ny zava-drehetra tamin'ny voalohany, marin-toerana ary afaka miara-miasa aminy ianao. Nametraka netbeans, geany, gdebi, virtualbox, chromium, libreoffice aho ary nieritreritra fa hanapaka ny fametrahana azy io, saingy tsia. Ny zava-drehetra araka ny tokony ho izy.
Salama, nametraka azy aho ary tiako, kanto, maivana, haingana, ny zavatra "ratsy" tokana dia ny fametrahana ireo rindranasa ilainao, ary zavatra iray izay manelingelina ahy kely dia ny mampifandray pendrive na ivelany ianao kapila amin'ny alàlan'ny usb ary tsy hametaka azy io ho azy, raha tsy izany dia mandeha tsara, ahhh ary tsy maintsy nanao fanavaozana amin'ny tanana aho mba hahamarika ny telefaona
Tiako ity distro ity. Manana fizarana xubuntu + compiz aho, LMDE iray hafa ary rehefa mampiasa eOs dia tena tsapako fa mandeha ilay masinina. Tena ilaina izany rehefa mila miasa ianao ary mahavita zavatra haingana. Mazava ho azy fa tsy misy zavatra tsy tadiavin'ny olona iray izany, saingy manantena aho fa miaraka amin'ny fanohanan'ny tsirairay, hitombo io tetikasa io, raha ny fahitako azy, ny distro tsara indrindra nozahako tamin'ny fahombiazan'ny Notebook (TM2, i3, 4MBRAM)
Linuxeros azo tombanana
Salama daholo. Voalohany indrindra, misaotra anao noho ity tranonkala ity izay nanitatra ny fomba fijeriko ny Elementary OS Luna. Mpampiasa windows foana aho hatrizay niasako tamina rindrambaiko matihanina izay angamba noho ny tsy fahampian'ny fahalalana na fanoherana ny fanovana na noho ny zava-misy kendrena dia nieritreritra aho fa mitondra fetra amiko rehefa miasa. Na izany aza, tiako ny sehatr'asa mahafinaritra satria rehefa manokatra ny PC aho, izay ho fiantombohan'ny asako, dia mihevitra aho fa ny zavatra voalohany hitako teo imasoko dia tsy maintsy mamorona fitiavam-bolo mahafinaritra ho an'ny fahitana sy ny toe-po. Raha ny zavatra novakiako teto dia ny Elementary OS Luna dia toy ny andriamanitra kely momba an'io ary tiako andramana. Manana fisalasalana kely momba ny fomba fikirakirana ireo mpamily pc aho rehefa mametraka ny OS satria hitako fa tsy nisy nikitika an'io lohahevitra io. Raha misy olona afaka manampy ahy amin'ity na zavatra hafa mifandraika amin'ity lohahevitra ity dia tena faly aho amin'izany. Tsarovy fa mbola tsy niasa teo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux aho ary te handray ny Elementary OS Luna ho toy ny laharam-piandohana.
Mametraka TLP amin'ny Arch Linux